[Hear Myanmar] Fundraising Campaign – Mae Tao Clinic
Posted on February 25, 2020 February 25, 2020 by mtc
Hear Myanmar (https://bit.ly/2ST2UJz) launchedafundraising campaign to support Mae Tao Clinic’s essential activities! Please check it out.
SAVE MAE TAO CLINIC- FUNDRAISERYou can playapart in the good work that Mae Tao Clinic has been doing since 1989, serving over 100,000 patients for FREE annually! They are raising 10 million baht (~4600 lakh MMK or $320K USD) to fund their operating expenditure shortfall this year and3million baht (~1400 lakh MMK or $95K USD) to restore the reduced staff stipend. DONATE @ http://bit.ly/hearmaetaoMMK donation options: KBZ Bank Account No.:09810 3098 0247 9001CB Bank Account Number::0110 1001 0000 2248Wave Money/Ok Dollar:09890993116 (maximum2lakh)^100% of funds received through the MMK accounts will be transferred to Mae Tao ClinicHEAR Myanmar is happy to support their initiative withadonation of 50 lakh and we hope that you SHARE this video and CONTRIBUTE as much as you can to this initiative! 😊😇[Zawgyi]၁၉၈၉ခုနှစ်ကတည်းက နှစ်စဉ်လူနာပေါင်း၁၀၀,၀၀၀ ကျော်ကို အခမဲ့ကုသပေးနေတဲ့ မယ်တော်ဆေးခန်းရဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အလုပ်တွေမှာ သင်ပါဝင်နိုင်ပါပြီ! မယ်တော်ဆေးခန်းဟာဆိုရင် ဒီနှစ်ကုသစရိတ်တွေအတွက် ဘတ်၁၀သန်း (မြန်မာကျပ် သိန်း၄၆၀၀၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃သိန်း၂သောင်း)၊လျော့ကျသွားတဲ့ ဝန်ထန်းတွေအတွက် ထောက်ပံ့ကြေးတွေကို ပြန်လည်တိုးမြှင့်ပေးဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဘတ်၃သန်း (မြန်မာကျပ် သိန်း ၁၄၀၀၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၅,၀၀) မတည်ဖို့အတွက် အလှူရှင်တွေကိုရှာဖွေနေပါတယ်။လှူဒါန်းချင်ရင်တော့ http://bit.ly/hearmaetaocopy:MMK donation options: KBZ Bank Account No.:09810 3098 0247 9001CB Bank Account Number::0110 1001 0000 2248Wave Money/Ok Dollar:09890993116 (အများဆုံးမြန်မာငွေ ၂သိန်းကျပ်)လှူဒါန်းသမျှအလှူငွေ ၁၀၀% ကိုမယ်တော်ဆေးခန်းကိုလှူဒါန်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်!မယ်တော်ဆေးခန်းကို ထောက်ပံ့ကူညီပေးဖို့အတွက်Hear Myanmarမိသားစုမှ သိန်း ၅၀လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်။ သင်လည်း ဒီဗီဒီလေးကို shareပေးပြီး တတ်နိုင်သမျှလှူဒါန်းပေးခဲ့ပါဦး!😊😇[Unicode]၁၉၈၉ခုနှဈကတညျးက နှဈစဉျလူနာပေါငျး၁၀၀,၀၀၀ ကြျောကို အခမဲ့ကုသပေးနတေဲ့ မယျတျောဆေးခနျးရဲ့ကုသိုလျဖွဈအလုပျတှမှော သငျပါဝငျနိုငျပါပွီ! မယျတျောဆေးခနျးဟာဆိုရငျ ဒီနှဈကုသစရိတျတှအေတှကျ ဘတျ၁ဝသနျး (မွနျမာကပျြ သိနျး၄၆၀၀၊ အမရေိကနျဒျေါလာ ၃သိနျး၂သောငျး)၊လြော့ကသြှားတဲ့ ဝနျထနျးတှအေတှကျ ထောကျပံ့ကွေးတှကေို ပွနျလညျတိုးမွှငျ့ပေးဖို့အတှကျ လိုအပျတဲ့ ဘတျ၃သနျး (မွနျမာကပျြ သိနျး ၁၄၀၀၊ အမရေိကနျဒျေါလာ ၉၅,၀၀) မတညျဖို့အတှကျ အလှူရှငျတှကေိုရှာဖှနေပေါတယျ။လှူဒါနျးခငျြရငျတော့ http://bit.ly/hearmaetaocopy:MMK donation options: KBZ Bank Account No.:09810 3098 0247 9001CB Bank Account Number::0110 1001 0000 2248Wave Money/Ok Dollar:09890993116 (အမြားဆုံးမွနျမာငှေ ၂သိနျးကပျြ)လှူဒါနျးသမြှအလှူငှေ ၁၀၀% ကိုမယျတျောဆေးခနျးကိုလှူဒါနျးပေးမှာဖွဈပါတယျ!မယျတျောဆေးခနျးကို ထောကျပံ့ကူညီပေးဖို့အတှကျHear Myanmarမိသားစုမှ သိနျး ၅ဝလှူဒါနျးပေးခဲ့ပါတယျ။ သငျလညျး ဒီဗီဒီလေးကို shareပေးပွီး တတျနိုငျသမြှလှူဒါနျးပေးခဲ့ပါဦး!😊😇
Posted by HEAR Myanmar on Monday, February 24, 2020
You can playapart in the good work that Mae Tao Clinic has been doing since 1989, serving over 100,000 patients for FREE annually! They are raising 10 million baht (~4600 lakh MMK or $320K USD) to fund their operating expenditure shortfall this year and3million baht (~1400 lakh MMK or $95K USD) to restore the reduced staff stipend.
DONATE @ http://bit.ly/hearmaetao
MMK donation options:
KBZ Bank Account No.:
09810 3098 0247 9001
CB Bank Account Number::
0110 1001 0000 2248
Wave Money/Ok Dollar:
09890993116 (maximum2lakh)
^100% of funds received through the MMK accounts will be transferred to Mae Tao Clinic
HEAR Myanmar is happy to support their initiative withadonation of 50 lakh and we hope that you SHARE this video and CONTRIBUTE as much as you can to this initiative! 😊😇